Taorian’ny Loza Voajanahary Haiyan, Mitaky Fanampiana Sy Rariny Ho An’ireo Niharan’ny Fiovàn’ny Toetrandro i Filipina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Novambra 2013 2:29 GMT
Tratr'ilay rivodoza mahery Haiyan ihany koa i Cebu Avaratra Sary avy amin'ny Facebook Act Regionseven,
Vao mainka nanamafy ny fitakiana hisian'ny hetsika manerantany goavana kokoa mba hiatrehana ny fiantraikan'ny fiovàn'ny toetrandro eto amin'izao tontolo izao, indrindra fa any amin'ireo firenena itambaranà nosy kely, ny faharavàna goavana naterak'ilay rivodoza mahery vaika Haiyan (Yolanda) tany Filipina afovoany.
Lasa feon'ireo firenena mahantra izay nitaky fanamafisana misimisy kokoa ny fifehezana ny fandotoana i Yeb Sano, mpitarika ireo mpanelanelana avy amin'ny governemantan'i Filipina tany amin'ny firesahana momba ny toetrandro tao Varsovia. Ankoatry ny nanaovany kabary nahazoany tehaka nirefodrefotra tao amin'ilay kaonferansan'ny Firenena Mikambana, namorona fanangonan-tsonia ety anaty aterineto ihany koa i Yeb mangataka an'ireo mpisera anaty aterineto haneho firaisankina amin'ireo rehetra iharan'ny fiovàn'ny toetrandro. Tamin'ny fotoana nanoratana ny lahatsoratra, efa manana sonia maherinny 700.000 ilay fanangonan-tsonia :
Miraisa hina amin'ireo vahoaka ao Filipina sy ireo rehetra iharan'ny fiovàn'ny toetrandro manerana ny tany. Ny feontsika rehetra miaraka dia afaka hanosika ireo governemanta mihaona ao amin'ny vovonan'ny Firenena Mikambana izay atao amin'izao fotoana izao mba hampitombo ny fanaraha-maso ny fandotoana sy hanampy ireo vondrom-piarahamonina mahantra indrindra amin'ny alalan'ny fanampiana ara-bola.
Ny fanontaniana hamaritra ny fiainantsika dia : afaka hisandratra ao anatin'izay fotoana izay ve ny maha-olona? Mbola inoako hatrany fa afaka
Tanàna manontolo tao amin'ny faritanin'i Samar sy Leyte no nofafàn'i Haiyan ary maherin'ny valo tapitrisa ireo olona tao amin'ireo nosy Visayas no nafindra toerana. Niteraka onjan-drivotra be nahafatesana olona an'arivony maro tao anatin'ny indray mipi-maso.
Marobe ireo Filipinos no efa nangataka sahady ny governemanta mba handray fanapahan-kevitra matotra mifandray amin'ny fiomanan'ny firenena hiatrika loza voajanahary goavana be ateraky ny fiovàn'ny toetrandro. Tony La Vina avy amin'ny Anjerimanontolon'i Ateneo dia mino fa tsy ampy ny fampifanarahana fotsiny amin'ny zavatra efa mitranga :
Ny hafatr'i Yolanda dia ny hoe tsy ho vitantsika velively ny hampifanaraka araka ny tokony ho izy/hanao peta-toko amin'ny fiovàn'ny toetrandro. Fa ankoatra izay, tsy tiantsika ny hahita hatrany ny maro amin'ireo nosy ireo ho rava isak'izay mihetsika ary ny hitohizan'ny vahoakantsika amin'ny fanombohana tsy misy fitsaharany miainga amin'ny faharavan-trano sy izay natao hivelomana.
Hita mazava fa tsy ampy ny fampifanarahana ary tsy maintsy ataontsika azo antoka fa tsy hohamaivanina ny hoe ny olombelona no mitondra ny fiovàn'ny toetrandro – ny fandefasana entona miteraka hafanàna ateraky ny fampiasàna angovo “fossiles” sy ny asa fampiasàna ny tany. Ary raha tsy maintsy ho manerantany ny fanamaivanana, tsy maintsy manao ny anjara tandrify antsika isika aty Filipina raha toa ananantsika ny herin-tsaina hitakiana amin'ireo firenena manankarena mba hampiheny ny fandefasan-dry zareo entona ary hanampy antsika hifanaraka amin'izay mitranga sy amin'ny fotoanan'ny loza voajanahary.
Macky Lovina, mpanao fanentanana momba ny tontolo iainana, no mampahatsiahy ny governemanta Amerikana fa mihoatra lavitra noho izay fandefasana fanampiana noho ny maha-olona ho an'i Filipina, dia tokony hanao ho laharam-pahamehany ny fampihenàna ny fandefasany entona karbona izy :
Ankehitriny Tiantsika ve i Etazonia? Tsy manana kakay manokana amin'ny Amerikana aho, sady amin'izay koa ny antsasaky ny fiainako mihitsy no niainako tany, ary velom-pisaorana ireo lehilahy sy vehivavy namily ny làlany mba hitondra fanampiana ho an'ireo faritra tratr'ilay loza mahatsiravina aho, saingy zavatra iray no aoka tsy ho hadinontsika… Eto ny antom-pisian'i Rivomahery Yolanda, ary mbola ho eto hatrany hatrany, ary amin'ny ampahany betsaka dia noho ny politikan'ny governemanta Amerikana mandrisika sy mampiroborobo amin'ny fomba mivatravatra ny fampiasàna angovo “fossiles”, ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany ary ny indostriam-pambolena mampiasa akora simika. Noho izany,rehefa mahita politisiana Amerikana manao kabary mampihetsi-po aho mikasika ny fifandraisana ara-piralahiana misy ao amin'i Etazonia sy Filipina, dia fantatro fa tsy marina izany. Sady izao koa e, raha tena ao an-tsain-dry zareo marina ny hahasambatra an'i Filipina dia ho efa nanao izay azony natao ry zareo hampihenana ny fiovàn'ny toetrandro. Ny marina dia ny mifanohitra amin'izany no ataony, amin'ny fahalalana tanteraka fa hoe ireo nosy tahaka an'i Filipina no ho voa mafy indrindra.
Miantso ireo firenena hafa i Jason ao amin'ny Twitter :
Antenaiko fa ireo izay any amin'ireo firenena nilaza ho manohana ny tra-boina tamin'ny Yolanda dia hanasonia ihany koa ilay Fifanarahana Momba Ny fiovaovan'ny Toetrandro.
— Jason Tupas (@kayeSIjason) 22 Novambra 2013
Ity sarintany tena manampy ity, avy amin'ny Biraon'ny Firenena Mikambana Mpandrindra ny Asa Fanampiana noho ny maha-olona, dia mampiseho ireo faritra rava sy ny ezaka famonjena any amin'ny Visayas
Mandritra izany, Enteng Bautista mampita ireo hetsika mitaredretran'ny governemanta amin'ny fanetsehana ireo asa famonjena sy ny asa fanampiana ho amin'ny fanarahamason'ny tsy miankina ny sehatry ny fitaterana sy ny indostria vaventy :
Rehefa fotoanan'ny loza voajanahary na loza mihatra amin'ny firenena dia tokony hanana ny fahefana hanetsika sy handefa mivantana izay azony hetsehina rehetra ny governemanta mba hanampiana ny vahoaka, toy ny sambo, fiaramanidina, botry fitateran-tsakafo, fifandraisana finday ary fotodrafitrasa momba ny fitsaboana. Saingy nahoana no tsy afaka manao izany izy fa manantena fotsiny ny “fo antra” avy amin'ireo vitsivitsy manan-katao? Satria fotsiny izao fanànana manokana sy fehezin'ireo vitsivitsy manan-katao sy matanjaka izy.
Tanànan'i Tacloban, ivon'ny loza voajanahary nateraky ny rivomahery. Sary an'i Gerg Cahiles
Ity lahatsary ity dia maneho ireo trano fongotra tao Hernani, Samar nandritra ilay tafiotra mahery :
Raha herinandro aty aorian'ny namelezan'ilay tafiotra mahery ny firenena, mbola ilaina hatrany ny fanampiana ho an'ireo tra-boina tamin'ilay rivodoza. Efa mihamalàky ny fitsinjaràna fanampiana saingy mbola misy hatrany faritra maro izay tsy manana ireo filàna fototra tena ilaina. Waray Bayaay: Mpitantana ny Fanampiana sy Famonjena ao Leyte dia mangataka ny hanomezana bisikilety mba hanamoràna ny fitsinjaràna haingana kokoa ny fanampiana sy handefasana vaovao ho any amin'ireo faritra tena lavitra:
…tianay homena bisikilety ireo Leytenos noho ny fitaovam-pitaterana tsy mbola misy foana amin'ny ankapobeny. Ilain-dry zareo io mba hakàna ny fanampiana avy any an-tanàn-dehibe na ny toby fitsinjaràna (ireo maro monina any amin'ny faritra tena lalina be ao an-tanàna na any amin'ny vohitra lavitra dia tsy ho afaka mihitsy haka izany noho ny tsy fisian'ny làlana); mila bisikilety izy ireo handehanany miasa na maka sakafo; ilain-dry zareo io hanapariahana ny vaovao (tsy mahazo intsony tambajotran'ny finday raha vao mivoaka an'i Tacloban), na hitaterana fisianà aretina na loza na havana mikaroka azy ireo. Alaivo sary an-tsaina izany mandeha 18 kilaometatra an-tongotra mba ho ao an-tanànan'i Tacloban
Mampitandrina momba ny fandefasana vovoka ronono ho any amin'ireo toby fialofana ny lahatsoratry ny “Nursing Mom” :
Tena malahelo tanteraka aho satria noporofoin'ny zava-nitranga naterak'i Yolanda fa miaina sahady ao anaty kolontsaina manome vàhana ny famahànana sahady isika. Vao maraina tamin'ity anio ity, nisy namana iray, renim-pianakaviana mbola mampinono, nandefa hafatra ho ahy fa hoe misy mpialokaloka ankehitriny ao amin'ny Tobin'ny tafika an-habakabaka ao Villamor ary afaka manampy ry zareo. Nangataka ilay namany ny handefasana fanampiana ronono vovoka any satria misy reny mitaiza kely ao.
Zava-mahaliana, ny Line, fandefasana hafatra be mpampiasa tokoa, dia nanangona vola tamin'ny alàlan'ny fivarotana ireny sticker fametaka amin'ny fiara sy ny sisa ireny ho fanampiana ny tra-boinan'i Haiyan.